Miski Cabdinuur Salal | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
Indha qalleelka waxa uu kamid yahay cudurda ugu caansan ee ku dhaca Indhaha qiyaastii 50% bukaanada soo booqdo dhaqtarka Indhaha waxa ay ka cabtaan indha-qalleel. Cudurkaan waxa uu imaadaa marka ay ilinta indhaha ku yaraato. Ilinta waxa ay qoysaa indhaha,waxayna wanaajisaa shaqada indhaha sidoo kale waxa ay ka hortaggtaa infekshanka ku dhaco Indhaha. Calaamadaha Lagu Garto Indha Qalleelka Waxaa Kamid: Indhaha oo gaduuto. Qofka oo indhaha ka dareemo daal. Qof oo uu ileyska uu dhibo. Araga qofka oo labo-labo noqdo. Qofka oo ay ku adkaato waditaanka gaawarida xilliga habeenkii. Maxaa sababo Indha Qalleelka? Isticmaalka badan ee aalaha dijitaalka sida kumbuutarka …
Qandhadu waa calaamad caddayneyso in uu heer kulka jirka uu ka sareeyo 37.6co, sida caadiga heer-kulka waxaa laga rabaa in uu noqdo inta u dhaxaysa 35.5-37.5co. Qandhada ama sara u kaca heer-kulka jirka waxa ay kamid tahay hababka difaaca jirkeennu isugu dayo inuu la dagaallamo infekshannada soo weeraro. Waxa uuna jirka ka caawiya inuu xalliyo caabuqa. Mararka qaarna qandhadu waxa ay keeni kartaa xaalad caafimaad daro oo aad halis u ah. Caalamadaha Kasoo Muuqdo Jirka Inta Ay Qandhada Ku Jirto Waxaa Kamid Ah: jareyn Cunna xumo. Dhidid Fuuq baxo. Hurda la’aan. iyo Qaraw. Wax-Yaallaha Sababo Qandhada Waxaa Kamid Ah: Hergab. …
Kansarka Lafaha ku dhaco waxa uu ku billowdaa wax qaab ahaan u ag buro, laakin aan aheyn bura,kaasoo ku faafo dhammaan lafta qeybaheeda kale. Mararka qaarna waxa uu faafitaankiisa gaari karaa xubnaha jirka qeybahiisa kale. Kansarka lafaha ku dhaco waxa uu kamid yahay kansarka dhif-dhifka ah ee lagu arko dadka ku nool caalamka. Waxa uu leeyahay nooco kale duwan,waxa aana kamid noocyada kansarka lafaha asiiba: Nooc koobaad waa kansar billowgiisa uu aad u badan yahay afka qalaad waxaa lagu dhahaa ( Multiple Myeloma) waa nooca ugu caansan kansarka ku dhaco lafaha. Badanaa waxaa lagu arkaa dadka da’ahaan ka weyn 60 …
kaadi mareenka waa tuubo kaadida kasoo qaaddo killiyaha ayadoo waliba keeneyso kaadi heysta. Tuubadaan mararka qaar waxaa ku sameysma dhagax, kasoo kaadiida dib ugu celiya killiyaha, waxa ay sababtaa in ay yaraato shaqa ay killida qabanaysay. Maxaa Sababo Dhagax Ku Samaysmo Kaadi Mareenka? Bulshadeenna Soomaaliyeed inta badan marka la dhaho hebel waxaa lagu sheegay dhagax ku sameysa kaadi mareenka, waxa ay ku leeyihiin waa biyaha wasaqda oo uu cabbay! Laakin Sababta Taasi Way Ka fogtahay Wax-Yaallaha Sababo Waxaa Kamid: Jugta kaadi mareenka ku dhacdo. Infekshanka ku dhaca kaadi mareenka iyo dhammaan xubanaha ka-ag dhow. Cabbis yarida biyaha. Calaamadaha Lagu Garto …
Qof waliba waa uu qarwaa inta badan, laakin waxaa jiro qarow lagu dhex socodo. Waligaa ma aragta qof qarow soconaayo? Adiga waligaa intaan soo kacday subixii malaguu sheegay in aad xallay soconeysey adigoo waliba wax war ah kaheyn? Haddaba Waa Maxay Qarow Socod? Qorow socodka waxa uu kamid yahay cudurada ugu caansaan ee lagu arko qofka marka uu seexdo kadib.Waxa uu caan ku yahay caruurta marka loo eego dadka waaweyn. Calaamadaha qarow socodka waxaa kamid ah: Badanaa waxaa lagu arkaa qofka 1-2 saac kadib xilliga hurdada. Uma jawaabo dadka kale marka ay la hadlaan inta uu ku guda jiro qarow …
Daryeelka caafimaadka Asaasiga ah waxuu dabooli karaa inta badan baahiyaha caafimaadka ee qofka noloshiisa oo dhan ay ku jirto, sida kahortagga, Daaweynta iyo baxnaaninta. Ugu yaraan kale bar dadka ku nool adduunka ma helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Daryeelka caafimaadka Asaasiga ah waxaa laga helaa xarun bixiso daryeel caafimaad waxaana muhiim ah in laga helo xarumahaas meel waliba oo ay dad ku nool yihiin min tuulo illaa dagmo. Daryeelka caafimaadka Asaasiga ah waa qaab bulshada oo dhan looga wada shaqeeyo caafimaadkooda qof, qoys ama bulsho. Waxay ka hadlaysaa go’aaminta ballaadhan ee caafimaadka waxayna diiradda saartaa dhinacyada dhammaystinaanta caafimaadka shaqsiga iyo …
Dariskaaga waa kuwa aad mar waliba iska ag-dhow dihiin sida ardayda aad waxbarasho wadaagga tihiin, kuwa aad shaqo wadaagga tihiin iyo kuwa aad dariska ku tihiin xagga deegaanka meesha uu gurigaaga ku yaallo. Haddaba qaab noocee ah ayaad ula dhaqantaa dariskaada? Ma ogtahay dariska in uu nagu leeyahay xaquuqo badan. Subanaheenna (N.N.K.H) waxa uu yiri “ Kama suulin jabriil sida uu iiga dardaarmayey dariska ilaa aan u maleeyey in uu idhaxli doono”. Kawaran dariski sidaa looga dardaarmay, haddii aad ula dhaqanto si aan habbooneyn, kawaran haddii maalin waliba saddax jeer cunno xaafadaada laga kariyo dariskaadana dabkiisa uu dansanyahay. Oo aad …